Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): Centrifuge rods’ from North Korea seized from ship in Tokyo
Centrifuge rods’ from North Korea seized from ship in Tokyo
at 3/20/2013 08:02:00 AM
မြောက်ကိုရီးယားမှ မြန်မာသို့ တင်ပို့ရန်ရှိသော အနုမြူ အပူခံ လောင်စာချောင်းများ ဖမ်းဆီးမိ
ဂျပန်အစိုးရက မြောက်ကိုရီးယားမှမြန်မာသို့ တင်ပို့ရန်ရှိသော စကာင်္ကူအလံလွှင့်တင်ထားသည့်
သဘောင်္မှ နူကလီးယား အားဖြည့် လောင်စာချောင်းကြီး ၅ ခုအား ဂျပန်နိုင်ငံက တွေ့ရှိရပြီး
၄င်းလောင်စာချောင်းများသည် နိူကလီးယား လက်နက်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း
Japan has seized aluminium alloy rods that can be used to make nuclear centrifuges fromaSingapore-flagged ship found to be carrying cargo from North Korea, the government said Monday.
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ၀န်ကြီးများအဖွဲ့မှ ဒုတိယ အတွင်းဝန် ယိုရှီဟီဒီ ဆူဂါပြောကြားရာတွင် ၄င်း
လောင်စာချောင်း ၅ ချောင်းသည် လွန်ခဲ့သော သြဂုတ်လတွင် ဂျပန် ရေပိုင်နက်မှ အဆိုပါ
သဘောင်္အား ခေါ်ယူစစ်ဆေးရာမှ အမှန်တကယ်ပင် အလူမီနီယံ အပူခံလောင်စာချောင်းများဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုပါသည်။
The five rods were discovered on the ship during its call at Tokyo port last August and were confirmed to be aluminium alloy through tests conducted over the past six months, said Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga.
ယနေ့ အတိုချုပ် သတင်းစာ၇ှင်းလင်းပွဲတွင် အဆိုပါလောင်စာချောင်းများသည် နူကလီးယား ဆိုင်ရာ တခုခု ထုတ်လုပ်ရန် အားဖြည့်ပေးသော အားဖြည့်လောင်စာချောင်းအဖြစ် အသုံးပြုရာတွင်
အလွန် အထောက်ကူပြုကြောင်း တင်ပြသွားသည်။
ယခု ဖမ်းဆီးမိသော လောင်စာချောင်းများသည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ပြဌာန်းခဲ့သော
မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ပတ်သက်သော သဘောင်္များအား ရှာဖွေခွင့် ပြုထားသည့် ဥပဒေအရ
ပထမဆုံးအကြိမ် သိမ်းဆီးရမိသော လောင်စာချောင်းများဖြစ်ပြီး ဒုံးကျဉ်နည်းပညာများနှင့်
နူကလီးယား နည်းပညာများအတွက် အသုံးပြုရန်တင်ပို့သော လောင်စာချောင်းများဖြစ်နေ
၄င်းလောင်စာချောင်းများ သိုလောင်ထားရာ ဂိုထောင်မှတဆင့် အစိုးရအား အပ်နှင်းရန် ညွန်ကြားလိုက်ပြီဟုလဲသိရသည်။
“The aluminium alloy is extremely strong and can be used in centrifuges, which are products related to nuclear development,” Suga said ataregular news briefing.
The rods were being stored ataprivate warehouse and the government on Monday ordered the firm to hand them over. The items are the first to be confiscated underaspecial law passed in 2010 that allows Tokyo to inspect North Korea-related ships suspected of carrying materials that can be used in nuclear and missile programs.
တရုတ်ပြည် ဒါလီယန်ဆိပ်ကမ်းမှ မြန်မာသို့ တင်ပို့ရန် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့သို့ရောက်ရှိလာသော
သဘောင်္ကဖြစ်ပြီး ၄င်းသဘောင်္ပေါ်တွင် တင်ထားသော ကွန်တင်နာသည် တတိယနိုင်ငံသို့
တင်ပို့မည် ကုန်သေတ္တာဖြစ်နေကြောင်း ဆူဂါမှ အတည်ပြုပြောကြားပါသည်။
The ship was reportedly on its way to Myanmar when it arrived in Tokyo via the Chinese port of Dalian. Suga confirmed the ship arrived via Dalian but said its cargo was bound fora“third country.”
မြောက်ကိုရီးယားအနေဖြင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွင်း နူကလီးယားဗုံးစမ်းသပ်မှုများ
၃ကြိမ်တိုင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့သည့် လ အထိပင် ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။၂၀၁၀ မှ
ပြန်လည် အကောင်ထည်ဖေါ်ခဲ့သော ၄င်းတို့၏ နူကလီးယာ အစီစဉ်အား ယခု ယူရေနီယံ
အနုမြူလောင်စာချောင်းများ ပြုလုပ်မှုအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေသည်။ ထိုအနုမြူအစီစဉ်မှ
လည်း ရေရှည် အသုံးပြုနိုင်သော ပလူတိုနီယံလောင်စာများအပြင် နူကလီးယားဗုံးလက်နက်များ
အဆင်သို့ ရောက်ရှိစေသော ဒုတိယမြောက် အဆင့်ဖြစ်သည်။
The North has conducted three nuclear weapons tests, in 2006, 2009 and last month, and disclosed in 2010 that it is developingaprogram to enrich uranium using centrifuges. That would give itasecond way to produce material for atomic weapons, in addition to its long-standing plutonium program.
ကုလသမဂ္ဂမှလည်း မြောက်ကိုရီးယား၏ နုကလီးယားလက်နက် ထုတ်လုပ်မှုအခြေနေအား
သံသယဖြစ်ခဲ့ပြီး ၄င်း၏ ပြည်ပသို့ တင်ပို့သော ကုန်သေတ္တာများအား သံသယရှိလျှင် ရှာဖွေနိုင်ကြောင်း ရာဇသံပေးထားခဲ့သည်။
၂၀၁၁ခုနှစ်မှ အဆုံးသတ်သွားသော မြန်မာ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ကာလကြာရှည်သော
အုပ်ချုပ်တလျောက်တွင် မြောက်ကိုရီးယားနှင့် နူကလီးယားဆိုင်ရာ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ
ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လက်နက်များအား ၀ယ်ယူနေခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
အိမ်ဖြူတော်မှ မြန်မာသည် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းသို့ ဖြေးဖြေးချင်း အပြုသဘောဆောင်ခြေလှမ်းများ လှမ်းသွားနေပြီးဟုလည်း လွန်ခဲ့သော နိုဝင်ဘာလမှ ပြောဆိုခဲ့ဘူးသည်။
United Nations sanctions resolutions require member states to inspect cargo suspected to be linked to the North’s nuclear development.
Myanmar was suspected of pursuing military and nuclear cooperation with North Korea during the long rule of the military junta, which finally came to an end in 2011.
The White House said last November that the slowly democratizing nation had taken “positive steps” to reduce its military relationship with the North.
အေဖက်ပီ ယနေ့သတင်းအား သင့်တော်သလို ဘာသာပြန်ဆိုတင်ပြထားပါသည်
ကြိုက်သလောက် လက်ဆင်ကမ်းဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းမှ လက်ရှိမြန်မာ အစိုးရသည်
နောက်ကွယ်တွင် မသမာမှုများပြုလုပ်နေမှုတို့အား အများပြည်သူနှင့် အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ကြီး သိစေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။